Ukuba sesichengeni kufunyenwe kwiTorBrowser yefayile yeefayile ze-macOS | Ndisuka mac
Ukuba sesichengeni kufunyenwe kwiTorBrowser yedilesi ye-IP evuzayo
Isiphene esitsha sokhuseleko siyavela kwihlabathi le-macOS. I-TorBrowser sisikhangeli esisekwe kwiFirefox, eyaziwa ngokuba yenye yezona zikhuselekileyo kumnatha, efihla idilesi ye-IP kwaye ingashiyi mkhondo wewebhusayithi odlula kuzo. Nangona kunjalo, esi sikhangeli asizalisekisi ukusebenza kwaso okwangoku, kuba bafumanise ukuba sesichengeni kwiinkqubo zokusebenza kwe-macOS kunye neLinux, ngokungagqibekanga, tyhila isazisi sakho kuye wonke umntu ofuna ukusazi.
Obu bungozi bufunyenwe emva kovavanyo lokhuseleko lweTor uqobo, kwaye iya kutyhila ubumfihlo bomsebenzisi osebenzisa isikhangeliNangona iinkcukacha zobugcisa zingekatyhilwa, abaphuhlisi sele besebenza ukulungisa le mpazamo.
UFilippo Cavallarin, Umphandi wezokhuseleko ofumene obu bungozi, utyhile ukuba ukuba sesichengeni kuvela kumbindi wesikhangeli, oko kukuthi, isiseko seFirefox esekwe kuso. Obu bungozi, ubhaptizwe njenge IXwebhu, ichaphazela iibrawuza ezisebenza kwi-macOS kunye neLinux, hayi kwiinkqubo yeWindows. Okwangoku, abaphuhlisi beTor bakhuphe okwethutyana uhlobo olutsha olubizwa ngokuba I-TorBrowser 7.0.9, ukuze abasebenzisi abachaphazelekayo banokuphepha olu lwaphulo-mthetho.
Ngale mpazamo inkulu yokhuseleko, uluntu lokhuseleko kunye noluntu lweApple bayabazi ubungozi obunokubakho ukulandela le bug ifunyenwe. Nangona indawo enesisombululo sengxaki sele ikhutshiwe (I-TorBrowser 7.0.9), Oonobangela bokuba semngciphekweni bayaphandwa. Siza kuqaphela ulwazi olutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukuba sesichengeni kufunyenwe kwiTorBrowser yedilesi ye-IP evuzayo
Khawuleza ufihle zonke ii -apps zedesktop ngeRe: Desktop
Nantsi ingcinga entsha yomtya kwi-Apple Watch, nangona iyingozi